ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: May 2008
These are drugs that are sometimes used to assistasexual assault. Sexual assault is any type of sexual activity thataperson does not agree to. It can include inappropriate touching, vaginal penetration, sexual intercourse, rape, and attempted rape. Because of the effects of these drugs, victims may be physically helpless, unable to refuse sex, and can't remember what was happened. The drugs often have no colour, smell, or taste and are easily added to flavoured drinks without the victim's knowledge. There are at least three date rape drugs:
GHB hasafew forms:aliquid with no odour or colour, white powder, and pill.
Rohypnol isapill and dissolves in liquids. New pills turn blue when added to liquids. However, the old pills, with no colour, are still available.
The drugs can affect you quickly. The length of time that the effects last varies. It depends on how much of the drug is taken and if the drug is mixed with other substances, like alcohol. Alcohol can worsen the drug's effects and can cause more health problems. Also, one drug ― GHB ― can be made by people in their homes, so you don't know what's in it.
Don't share drinks. Don’t drink from punch bowls or other large, common, open containers. They may already have drugs in them.
If you think that you have been drugged and raped, go to the police station or hospital right away.
Don't urinate before getting help. Don't douche, bathe, or change clothes before getting help. These things may give evidence of the rape.
You also can callacrisis centre orahotline to talk withacounsellor. . Feelings of shame, guilt, fear and shock are normal. It is important to get counselling fromatrusted professional.
These areanumber of practical steps you can take to reduce the risk of drug assisted sexual assault: You cannot expect to rememberalong list of prevention advice, every time you go out. Just be aware.
Posted by Unknown | at 11:43 AM |0comments
KHAT KYAR VILLAGE, Myanmar
Sitting dejectedly inahut surrounded by the debris and stench that are the aftermath of the powerful cyclone that struck here three weeks ago, Then Khin, 70, reflected on the grim task of rebuilding what is left of her family and their home.
Since Cyclone Nargis devastated the area May 3, this isolated village in the Irrawaddy Delta has been all but ignored by the junta. As of this past weekend, it had yet to be reached by international relief workers.Then Khin lost 15 family members when Nargis swept through. For those in the family who survived, life isalitany of woes and the recovery has only just begun.A 29-year-old grandson of Then Khin has gone insane, wandering day and night through the fields looking for his wife and son, both of them swept away by the furious floodwaters that came with the cyclone.Her eldest granddaughter, Thit Khine, 31, who lost her husband and both her children, remains haunted by the memory of her 2-year-old daughter, Thwe Tar, who was clinging to her mother's neck when the storm snatched her away.Still another grandchild of Then Khin,a14-year-old girl named Myint Myint Kyi, lost her ability to speak for two days after losing all of her immediate family: both her parents and her 7-year-old twin brothers. When she finally came to, she wasadifferent girl, no longer interested in school."I am sad," the girl said, with tears streaming down her cheeks, while her grandmother wiped away her own tears. "Come next month, I was supposed to take my twin brothers to school with me."For people like Then Khin's family, for those who live in the isolated, outlying hamlets of the delta, putting their lives back together after Nargis has beenasad affair - andastruggle that international aid workers have largely been unable to help ease. The Myanmar government, critics say, is distrustful of outsiders and does not want the villagers to meet foreigners. Meanwhile, the ruling junta is unable or unwilling to provide adequate help on its own."I don't expect anything from the government. I never have and I don't now," Then Khin said. "I heard on the radio about foreign help on its way, but I haven't seen any in the past 20 days. It's the same as before, nothing changed."The only government help Then Khin has received wasasmall packet of rice, which she won by the luck of the draw. The village authorities came only once, with some rice, blankets and other relief from the central government. The supplies were distributed by lottery because there was so little. The rice packet was not enough for even one meal for the 20 surviving family members who now crowd her hut.The village of That Kyar lies near the mouth of the delta's Pyapon River, downstream from Pyapon,amajor delta trading town about 100 kilometers, or 60 miles, southwest of the principal city of Yangon.A motorboat that left Pyapon carrying several visitors to That Kyar reached the village after more than two hours on the river, navigating around capsized ships and broken jetties.Upon reachingapoint in the river where the sea air finally smelled of salt and where gulls could be seen, the boat moved intoatributary and chugged upstream for another 40 minutes. Onceapicturesque hamlet lined with coconut trees, That Kyar is now little more thanaheap of rotting debris.Unlike the cyclone victims who live near roads and receive help from private donors bringing supplies from the bigger cities, villages like That Kyar have been left to fend for themselves.Three weeks after the cyclone came and went, the United Nations said that aid had reached less than one-fourth of the two million survivors in the hardest hit areas of the delta.In what many observers hope will beabreakthrough, Myanmar's generals finally told the United Nations last week that they would allow workers of all nationalities to go into the devastated areas to assess the damage. So far, virtually all foreign aid workers have been banned from the delta.And it remained unclear how much access relief workers and aid agencies will have to those areas.Many people there did not even know that Saturday was the day they were supposed to vote onanew Constitution,adocument designed to prolong the junta's grip on power.In That Kyar,avillage of 300 families,athin blue tent donated by the Russian government was the only obvious sign of foreign help. Amid the debris, the Myanmar government had put upafreshly painted sign telling the villagers to vote last weekend."Government and international assistance hasn't reached this village, not yet," saidaMyanmar volunteer who began shipping plastic roofing sheets and food by ferry to That Kyar and four neighboring villages early last week.Young Burmese like him, who navigate the delta tributaries to bring aid to the outlying hamlets, appeared to be providing the only substantive help reaching people here.But across those tributaries, bloated human bodies are stillacommon sight."After the cyclone, so many bodies floated by that we had to push them away from our shore," said Tin Swe, 69,aneighbor of Then Khin.Tin Swe's family had lost no one to the cyclone;ason paralyzed byachildhood illness survived by hanging ontoatree. But looking overapile of contaminated seed rice rotting in the sun, Tin Swe wondered how he was going to regenerate his damaged field and replace the paddle-boat, two water buffaloes and seeds he had lost, especially since prices for everything have soared since the storm."This year's harvest is gone," he said.Despite the growing despondency of their own people in the delta and the continued international outrage over their callousness, Myanmar's military rulers appear to count on one thing to prolong their hold on power: People in the Irrawaddy Delta will eventually go back to lives of poverty and political disenfranchisement.Amid the despair, life was trying to return to something like normalcy. Along the tributaries, for example, men were busy putting up bamboo frames for new huts.Whenaboat docked at one jetty, villagers rushed out to help the visitors ashore. Elderly men invited them for tea, while women tried to sell them eggs.As the evening sun dipped behind the coconut trees of the village of Naut Pyan Toe, Htat Ei Linn, 16, and her friends were out on the jetty, bathing. They scooped water from the river and poured it over their hair. They gargled with the same dark-brown water in which so many of their friends and neighbors had perished."I am still looking for the bodies of my grandmother and 8-year-old brother," Htat Ei Linn said, matter of factly, as she brushed her hair.For Then Khin, the grandmother who had lost 15 of her family members, the struggle remains overwhelming. Before the storm she had ducks, chickens, pigs and goats - 200 in all - and all of them are gone.Two of her five buffaloes survived the storm, but both are sick and soon may die.For most delta villagers, recovering the bodies of lost relatives in the stormy and sweltering weather had at first been an urgent task. Urgent, but largely futile. So far, Then Khin said, she has found only two.In the Burmese belief system, the spirits of the dead stay around their bodies for seven days. During this period, the bereaved family must pray to Buddha and make donations to monasteries and the needy on behalf of the dead, the better to ensure better fates in their next lives.But with most of the bodies missing, that time-honored ritual cannot be performed.Another of Then Khin's granddaughters, Cho Mar, who is 19, said that at night, some villagers hear the voices of unblessed ghosts in the forest and fields. The voices are singing strange songs.Cho Mar survived the storm by hanging on to the top ofatree foraday, and she could only watch as neighbors were swept away by the walls of water brought by the cyclone.She lost both parents and her 8-year-old brother."We were hopeless before, we are hopeless now," she said. "This river, this delta, is our world. We will live and die in the same place where my parents lived and died."
International Herald Tribune သတင်းစာကြီးမှကူးယူတင်ပြသည်။
Posted by Unknown | at 1:29 PM |0comments
ဆောင်းပါးရှင် Con Coughlin ရေးထားတာပါ။
Suddenly, all the sourness generated by the manhandling of protesters attempting to disrupt the worldwide procession of the Olympic torch has been set aside.
It has been replaced by shock at the heart-rending images of grief-stricken Chinese mothers collapsing after discovering the mangled bodies of their children recovered from the rubble-strewn remains of their school.
The efficiency with which the rulers have responded to the massive destruction has been impressive. The 50,000 troops dispatched to Wenchuan, the earthquake's epicentre, have made an immediate impact in helping to rescue trapped survivors and distributing vital food and medical supplies.
The operation has been well-managed, with airports closed to civilian traffic so as not to impede relief flights. Television bulletins broadcast appeals for blood donations, and priority has been given to restoring electricity and clearing roads.
Compare the professionalism of the operation, with the way the United States, the world's other superpower, responded to Hurricane Katrina in 2005, which killed fewer than 1,000 people but fatally wounded President George W. Bush's reputation for administrative competence.
With the Olympic Games only three months away, it is understandable that the Chinese are keen to demonstrate their readiness to tackle any disaster.
Even so, this is the acceptable face of China, far removed from the image ofacountry that has the world's highest execution rate and imprisons anyone who expresses the slightest criticism of the communist regime.
But the country has comealong way since the abysmal response to the last major earthquake, in the eastern city of Tangshan in 1976, which killed 240,000 people.
Even five years ago, at the height of the Sars epidemic, the instinctive reaction of most officials was to cover up the outbreak, leading to accusations that the party was more concerned with promotingafalse image of stability than caring for the masses.
The authorities' conduct has demonstrated what can be achieved when Beijing puts its mind to it, which makes its reluctance to undertakeasimilar mission in neighbouring Myanmar (before disaster struck at home and commandeered all available resources) all the more unfathomable.
The contrast between China's response and the criminal negligence of the Myanmar junta after Cyclone Nargis devastated the Irrawaddy Delta could not be more stark.
Far from rushing to aid survivors, Myanmar's generals were more concerned with officiating over the constitutional referendum that will guarantee them power forageneration.
If Beijing had been prepared to be as active in Myanmar's disaster relief as its own, much of the suffering - and soaring death toll - might have been avoided.
China, after all, has demonstrated its positive influence over the junta. It was mainly thanks to Beijing's intervention last autumn that the junta was persuaded to tone down its response to the pro-democracy campaign initiated by monks.
Rather than indulging in widespread slaughter, the generals confined themselves to physically abusing the monks and incarcerating them without charge.
But while the Chinese have demonstrated their proficiency at crisis management at home, they do not have suchagood reputation in foreign affairs.
In all the main security issues of the past decade, the Chinese have invariably been more ofahindrance. While the world tried to halt the carnage in the Balkans in the 1990s, China's default position at the United Nations, where it is one of the five permanent members of the Security Council, was to abstain on contentious resolutions.
Similarly, during the crucial months preceding the invasion of Iraq, China tookaback seat, leaving the British, French, Americans and Russians to squabble among themselves.
Even in their own backyard, over North Korea's nuclear weapons programme or the survival of Myanmar's military dictatorship, the Chinese appear strangely reticent to demonstrate leadership.
Partly, this is because of their deep-rooted paranoia that the outside world is out to get them, and partly because they have found that pursuingapolicy of dedicated self-interest can also have its rewards.
Not openly critical
One reason Beijing has been reluctant to be too openly critical of Yangon is because it depends on Myanmar to supply oil and gas for its rapidly expanding energy needs.
Similarly, China's ambivalent attitude towards Iran's nuclear enrichment programme derives from the multi-billion dollar oil contracts Beijing has negotiated with Tehran.
The problem for China is that now it has demonstrated its proficiency in handling one crisis, demands will inevitably be made on it to get involved in others far beyond its borders.
In terms of making the worldasafer and better place, this would be no bad thing. If China really wants to be treated asasuperpower, then it should start behaving like one.
Posted by Unknown | at 11:39 PM |0comments
Perfect Storm With Perfect Dictatorship
ပြင်သစ်စာရေးစရာနှင်.အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Bernard-Henri Levy ရဲ.ကျွန်တော်တို.ရဲ.
ချစ်လှစွာသော Military Junta ကိုဝေဖန်ထားတာလေးဖတ်ကြည်.ပါဦး။စကားလုံးတွေကပြောင်
ခေါင်းစဉ်လေးတော. perfect storm ဆိုပြီးထပ်ဖြည်.ထားတယ်။
The ruling generals are crazy . They are not just cruel but clinically insane and in fact paranoid
The generals are deaf. As everyone now knows, the regime was warned by weather
forecasters in India two days before the cyclone arrived - five days before by forecasters in
Thailand - and it refused to listen.
The generals hate their own people. The regime does not merely disdain them, it hates
them, and the hate is cold, total and murderous . How else to explain the unimaginable sight
of convoys being held by customs at the Thai Border? Of planes filled with provisions and
forbidden to land? How else to explain that while each hour counted, chances of finding
survivors in the ruins of submerged villages in Bogale or Laputta, food and mecidines
that could save them were barely trickling in ?
The generals are crazy. They are not just cruel but clinically insane and in fact paranoid,
which is another key to understanding why this lunatic regime prefers letting its people
die to opening its doors to Doctors Without Borders. It claims that the humanitarian
workers are really spies, that they are entering the country only to destabilise and ruin it,
that the packages from the UN's World Food Programme contain poisons more deadly
than the toxins given off by the decomposing bodies floating in the Irrawaddy delta. These
clinically insane people, these cretins, clearly believe these things.
The generals are racist. Suffice it to say that , yes, Myanmar isapost-colonial country
whose paranoia can perhaps be explained by the fact that long ago it had to endure the
miasma of racism's plague. Today it's the regime that is racist, that sees the white man,
the Westerner, the American as its natural enemy, that in the purest xenophobic and thus
racist tradition sees the foreigner asagerm ,acorrupting agent,avirus.
Country is drowning
The generals are monomaniacal. This racism, this craziness, also stems from their
thinking only of themselves, of their own future and survival. The country is drwoning:
two thousand square miles of rice fields are already underwater; the rare witnesses speak
of swamps littered with cadavers, of putrid, polluted ground water and children shivering
possibly from malaria or dengue fever. And the regime's only interest- incredibly- was
the farcical referendum forced upon the people with the sole intention of further cementing
the regime's position.
The regime is autistic. It lives hermetically sealed off and withdrawn from the world,
having adopted the absurd notion of exterminating the people if is supposed to govern.
Are 20,000 dead? ... 30,000 ? ... 100,000 ? Will it be 300,000 tomorrow - or more?
The dictatorship does not care , nor is it keeping track.
Let there be no mistake: It doesn't even bother to lie, minimise , or cover up; these
bodies were truly faceless and nameless when alive , so why would it be any different now
that they are dead? The generals are happy about only one thing: the wisdom of the
astrologers who persuaded them in November 2005 to abandon Yangon and ensconce
themselves in Naypyidaw, inabrand new capital in the heart of the jungle, far from the
water and its tornados.
The generals stay focused, too. They are crazy, sure, and paranoid no doubt, but their
reflexes remain intact, their responsiveness unerring. In the middle of the disaster, the
regime reacted at the speed of light toamutiny at the Insein prison in Yangon, sending
in soldiers they would not even consider deploying to help the homeless. According to
reports, the soldiers promptly executed 36 of the mutinous prisoners.
The generals are mafia-like. At the height of the cyclone's aftermath, when the World
Food Programme was begging them to let throughaconvoy carrying high -energy biscuits
that could have fed up to 95,000 people, the generals said, " Sure, why not?" - only to
confiscate the merchandise, probably to resell on the black market.
The regime is stingy. The $5million it released for emergency aid in the first week
following the cyclone isathousandth of the annual revenue it receives from the sale
of fossil fuels to foreign companies like Total - or , calculated another way, on-tenth of
the value of the wedding gifts received by Thandar Shwe, the beloved daughter of
Myanmar's generalissimo, Than Shwe.
Finally, the regime is grotesque. Yes, as always and in spite of the horror,it is profoundly,
surreally grotesque. That is in any event what one feels when confronted by the image of
this decorated imbecile with his dark sunglasses as he shouts on television - which no one
can watch since there is no electricity - that " the situation is returning to normal' .
Faced with this spectacle, this machine of death, hate and madness, one hesitates
between sorrow, pity,adesire to see these assassins brought before an international
criminal tribunal that could try these kinds of crimes, and , finally, nostalgia for the
days when France created and imposed upon the world the right and the duty to intervene.
U.A.E နိုင်ငံထုတ် Gulf News သတင်းစာ မှာ မေလ ၁၈ ရကနေ.ကဖေါ်ပြခဲ.တဲ.ဆောင်းပါးပါ။
Posted by Unknown | at 10:31 PM |0comments
Political Cyclone In Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းတခုပါ ထပ်မံကျရောက်နေသည်လော
Posted by Unknown | at 2:01 AM |0comments
Posted by Unknown | at 1:51 AM |0comments
မုန်တိုင်းအလွန် - ရန်ကုန် က ဒိုင်ယာရီ ၂
မေ ၉၊ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်စစ်မျက်နှာကနေ ငါ စာရေးလိုက်တယ်။
နင် နေကောင်းရဲ့လား။ ငါရေးလိုက်တဲ့ ပထမစာကို ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေသလား။ နင်တို့ အဝေးကလှမ်းပြီး စိတ်ပူနေရမှာ စိုးသလို ဒီမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း အမှန်အတိုင်း သိစေချင်နေတယ်။ နင် ဆက်ဖတ်ပေးပါဦး။
မနေ့က ငါ့အဖေက လူတယောက်လွှတ်ပြီး မှာလိုက်တယ်။ သူ့ဆီကို အမြန်ဆုံး လာခဲ့ပါတဲ့။ ငါ့အဖေအိမ်ကို ငါ ရောက်သွားတော့ အဖေ့ရွာက အကို တယောက် ရောက်နေတယ်။ အဖေ့မျက်နှာနဲ့ အကို့ အရိပ်အခြည်ကို မြင်လိုက်ကတည်းက တစုံတရာ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းသွားပြီဆိုတာ ငါ သိလိုက်တယ် ဟေမန်။
အကိုက ငါ့လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြောတယ်။
“ရွာမှာ ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး ညီလေး" တဲ့။
ငါ့စိတ်တွေ လေထဲမှာ ၀ဲပျံသွားပြီးတော့ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ရွာကလေး တရွာကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ချောင်းတလျောက် သွယ်တန်းနေတဲ့ အိမ်ကလေးတွေ၊ ဓနိတော၊ အုန်းတောနဲ့ မျက်စိတဆုံး လယ်ကွင်း စိမ်းစိမ်းကြီးတွေ၊ အဝေးက ဘုရားဆည်းလည်းသံနဲ့ ချောင်းထဲက တဘုတ်ဘုတ် မြည်နေတဲ့ မော်တော်သံ။ ကျောင်းဆင်းချိန်ဆိုရင် ရွာကျောင်းသားလေးတွေက ရွာရိုးတလျောက်မှာ အဖြူအစိမ်းလေးတွေနဲ့ စီရီလို့။ ဒီရွာမှာ ငါ့အဘေး ခေါင်းချခဲ့တာပေါ့။ ဒီရွာမှာ ငါ့အဘိုး နေသွားခဲ့တာပေါ့။ ဒီရွာမှာ ငါ့အဖေ ပညာသင်ခဲ့တာပေါ့။
ငါ့စိတ်တွေ စုစည်းပြီး သတင်းထောက် တယောက်ရဲ့ တာဝန်တွေကို ဆက်လုပ်ဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ မုန်တိုင်းကြီး လာတော့မယ်ဆိုတာကို ရွာသားတွေ ကောင်းကောင်း မသိကြဘူး။ တိုက်မယ့်ညမှာ မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားက ၀တ်ကျေတန်းကျေ ထိုးပေးတဲ့ သတင်းစာတမ်း တကြောင်း ကိုလည်း ရုပ်မြင်သံကြားစက်ရှိပြီး ကြည့်မိသူတချို့ပဲ နည်းနည်း သတိထားမိလိုက်ကြတယ်။ အကို တယောက်ပဲ ပညာတတ်လည်းဖြစ်ပြီး ရေဒီယိုလည်း ပုံမှန်နားထောင်သူ ဆိုတော့ RFA က ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံရဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းအပေါ်မှတ်ချက်ကို နားထောင်ရတဲ့အခါ ဒါဟာ အန္တရာယ်ပဲလို့ သိခဲ့တယ်။
မုန်တိုင်းရဲ့ လေထဲမှာ ရွာက အိမ်တွေအားလုံး ကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်။ သစ်ပင်တွေ အားလုံး လဲကျတယ်။ ချောင်းထဲက ရေတွေ လျှံတက်လာပြီး လယ်ကွင်းတွေအားလုံး ရေကမ္ဘာဖြစ်သွားတယ်။ မနှစ်က ငါသွားတုန်းက ထမင်းဟင်းကို စိတ်ကြိုက်ချက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ငါ့အဒေါ်ကြီး (ငါ့အဖေရဲ့ အမ) နဲ့ သူ့ခင်ပွန်း ၂ ယောက်စလုံး သစ်ပင်ပိပြီး သေဆုံးသွားတယ်။ ငါ့အမ၀မ်းကွဲ တယောက် မှောင်နဲ့ မည်းမည်းမှာ ကလေး ၂ ယောက်ကို သယ်ပြေးရင်း လေဆောင့် အတိုက်မှာ ကလေး ၂ ယောက်လုံး လက်လွတ်ပြီး ရေထဲကျပျောက်သွားခဲ့တယ်။ ငါ့တူလေး နဲ့ ငါ့တူမလေး …
ဟေမန်ရယ် … ဟေမန်ရယ် … ဟေမန်ရယ် …
ငါတို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ငိုစရာ မျက်ရည်တောင် ကျန်သေးရဲ့လား ငါမသိတော့ပါဘူး။ ဒို့ တရွာလုံးမှာ ပြိုမသွားတဲ့ အိမ်ဆိုလို့ အကို့အိမ်တအိမ်ပဲ ကျန်ခဲ့တယ်။ တရွာလုံးက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ လူတွေအားလုံး မတ်တပ်ရပ်နေကြရတယ်။ ချောင်းထဲမှာ လူသေ၊ ကျွဲနွားသေတွေက ပေါလော။ လယ်ကွင်း ရေဖွေးဖွေးမှာ ကောက်မနိုင်တဲ့ အလောင်းတွေက ပက်လက်။ သောက်စရာမရှိတဲ့အတွက် ငန်ပြီး နံနေတဲ့ ချောင်းရေကိုပဲ သောက်ကြရတယ်။ ပုပ်နေတဲ့ ကျွဲနွား အသေတွေကို ဖျက်စားကြတယ်။
ရန်ကုန်ဟာ စစ်မျက်နှာဆိုရင် ဧရာဝတီတိုင်းဟာ “ငရဲ” ပဲ … ဟေမန်။
ကယ်ဆယ်ရေးလား … ။ စားနပ်ရိက္ခာ ဝေငှဖို့ မပြောနဲ့၊ သေစာရင်း ကောက်မယ့်လူတောင် ရောက်မလာပါဘူး။ လူတွေဟာ အခုထက်ထိ ရေထဲမှာ နေ နေ ကြရဆဲ။ ငါ့အကိုက ပြောတယ်။
“လူတွေ ရေထဲမှာ ကြာနေပြီ။ တချို့အခုထိ မသေသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေမှာပါပဲ …” တဲ့။
ငါ့ ရင်တွေ ပွင့်ထွက်တော့မယ်။
ဒို့ရွာလေးဟာ ဒေးဒရဲမြို့နယ် အပိုင်ထဲက ဂွကြီး ကျေးရွာ အုပ်စုဝင် ရွာတရွာပါ။ ဒေးဒရဲ မြို့နယ်ထဲမှာ ကျေးရွာစု ၉၂ စု ရှိတယ်။ ဂွကြီးအုပ်စု တစုထဲမှာ လူ ၁၀၀ ကျော် အသက် ဆုံးရှုံးတယ်။ ကျေးရွာ အုပ်စု ၉၂ စု ပေါင်းဆိုရင် နင် မှန်းကြည့်ပေတော့။ ဒေးဒရဲမြို့နယ်ထဲမှာ သောကြာ၊ တံတား၊ တံတားချောင်၊ ကန်ဆိပ်နဲ့ ကျုံဟဲရွာတွေဟာ ရွာလိုက်ပျောက်သွားတယ်။ ငါ့အကို ခန့်မှန်းတယ်။ ဒေးဒရဲ တမြို့နယ်အတွင်းမှာ လူ ၁ သိန်း နီးနီး သေနိုင်တယ် တဲ့။
ဖျာပုံ၊ ဘိုကလေး မြို့နယ်တွေမှာလည်း ရွာလိုက် ပျောက်သွားတာတွေ အများကြီးပဲ။ “ကဇုံကနိ” တို့၊ “မိန်းမလှကျွန်း” တို့ဆိုတာ အင်မတန် နာမည်ကြီးတဲ့ ရွာကြီးတွေပေါ့။ အခုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ စပါးကျီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဟာ နလန်မထူနိုင်အောင် ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီ။ လူ သိန်းချီ သေဆုံးခဲ့ရပြီး လယ်ကွင်းအားလုံး ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီ။ ရေချို မြစ် ချောင်း ကန်တွေထဲကို ရေငန်တွေ ၀င်ခဲ့ပြီ။ ဥယျာဉ် ခြံမြေတွေ လဲပြိုသွားခဲ့ပြီ။ ဘယ်တော့မှ နလန်ပြန်ထူတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ငါ့အကိုက မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြောခဲ့တယ်။
“ကယ်ဆယ်ရေး ကော? " လို့ နင်ထပ်မေးအုံးမလို့လား ဟေမန်။ ကျေးရွာတွေဘက်ကို ခြေဦးလုံးဝ မလှည့်လာတဲ့ အာဏာပိုင်တွေက ဖျာပုံမြို့ပေါ်မှာတော့ ခေါက်ဆွဲထုပ် နည်းနည်း ဝေပြတယ်။ မဝေခင်မှာ ကင်မရာတွေကို အကျအန ဆင်ကြတယ်၊ ဓာတ်ပုံသမားက "ရပြီ"လို့ အချက်ပြတာနဲ့ စ ဝေပြီး ခဏနေတော့ သိမ်းလိုက်ကြတာပေါ့။
ရန်ကုန်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဘယ်တုန်းကမှ ပေါ်မလာတဲ့ ယူနီဖောင်းတွေက ၅ ရက်နေ့ မနက်မှာ ရှိုးနဲ့ မိုးနဲ့ ပေါ်လာပြီး လဲကျနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေ အနားမှာ နေရာယူကြတယ်။ ကင်မရာတွေက မီးတွေလင်းပြီးသွားတဲ့အခါတော့ ကားပေါ်တက်ပြီး ပြန်ပျောက်သွားကြတော့တာပဲ။ ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်ရဲ့ တနေရာမှာတော့ ထရပ်ကားပေါ်က စစ်သားတွေ ဆင်းလာကြတယ်။ လူတွေက ရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့လို့ ထင်ကြတယ်။ သူတို့က ပါတဲ့ ဓားတွေနဲ့ သစ်ကိုင်းတွေကို ထင်းအဖြစ် ခုတ်ပြီး ကားပေါ်တင်သွားကြတာ။ လမ်းပေါ်မှာ လဲကျ ကျန်နေခဲ့တဲ့ သစ်ပင်ကြီးက ခြေမဲ့ လက်မဲ့ တုံးလုံး ပက်လက်။
သတင်းစာတွေထဲမှာတော့ "ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများ ထိရောက်စွာ စီမံ" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လမ်းရှင်းလင်းရေးတွေ လုပ်နေတဲ့ ပုံတွေပဲ ဖော်ပြနေကြတယ်။ မိုက်မဲတဲ့ မြန်မာ့အလင်းကတော့ အခြေအနေကို နားမလည်ဘဲ "မိုးဦးကျ ကာလမှာ လျှပ်စစ်မီးသုံးရင် သတိထား" တဲ့။ အောက်မြန်မာပြည်တခုလုံး ကျောက်ခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားချိန်မှာ ဘယ်လျှပ်စစ်မီးကို သတိထား သုံးရမှာလဲ။
သွပ်တွေ တချပ်ကို ၆,၀၀၀ ကနေ ၁၆,၀၀၀ ဖြစ်သွားတယ်။ အခု ၀ယ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ဆန်တောင် ၀ယ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဆန်ကွဲနဲ့ ရေစိုဆန်ပဲ ၀ယ်လို့ရတယ်။
ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်သွားရတာလဲလို့ နင်မေးချင်နေတာလား ဟေမန်။ ဒါမှမဟုတ် အစိုးရက ကြိုမသိဘူးလားလို့ မေးမလို့လား။
တကယ်တော့ ပါးနပ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် အပါအ၀င် သူတို့သုံးစွဲနေတဲ့ လေယာဉ်တွေအားလုံးကို တံတားဦး နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကို မပျက်စီးအောင် ကြိုပို့ထားပြီးသား …။ ပြီးတော့ ငါတို့ပြည်သူတွေကို ပြောတယ်။ … မစိုးရိမ်ပါနဲ့ … တဲ့။
သစ်ပင်ပိပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ အဒေါ်
ရေထဲကို ကျသွားတဲ့ ငါ့ တူလေးနဲ့ တူမလေး …
ကလောင်ကို လွှတ်ချပြီး လက်နက်တစုံတရာကို ကောက် မကိုင်မိဘို့ ငါ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားနေရတယ် ဟေမန် … ။
နင့် ငါ့စာတွေ ဖတ်ချင်သေးရဲ့လား …။
Posted by Unknown | at 2:23 AM |0comments
မုန်တိုင်းအလွန်- ရန်ကုန်က ဒိုင်ယာရီ
မေ ၈၊ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်စစ်မျက်နှာက ငါစာရေးလိုက်တယ်။ ဘာအလင်းရောင်မှ မရှိတဲ့ မြို့ပျက်ကြီးရဲ့ ညမှာ ဖယောင်းတိုင်တတိုင်ရဲ့ အလင်းနဲ့ ဒီစာကို ငါရေးနေတာ ဟေမန်။ နင်တို့ သိပ်စိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်လေ။ ငါ့မျက်လုံးကို မှိတ်လိုက်တဲ့အခါ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုက နွေးထွေးပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ နင်တို့မိသားစု အိမ်ကလေးကို သတိရနေတယ်။ ဥဏ်ရည်ထက်ပြီး သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးကိုလည်း ငါသိပ်လွမ်းပါတယ်။
ငါနဲ့ ငါ့မိသားစု အထိအခိုက်မရှိပါဘူး ဟေမန်။ ငါတို့အိမ်အမိုးပေါ်မှာ သစ်ပင်ကြီးကြီးတပင် လာပိနေပေမယ့် အိမ်ကလေးကို ငါတို့ စွန့်ခွာလာခဲ့ရပေမယ့်၊ အခု ယာယီနေ နေရတဲ့နေရာမှာ သောက်စရာ၊ သုံးစရာ ရေမရှိပေမယ့် ငါတို့ ကျန်းမာနေဆဲပါ။
ရန်ကုန်ကို နင်မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူး ဟေမန်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါတောင် ရန်ကုန်ကို မမှတ်မိတော့လို့ဘဲ။ ဒီမှာပဲ အမြဲနေနေရတဲ့ လူတယောက်တောင် မြို့ကြီးရဲ့ အရင်ပုံရိပ်တွေကို ဖမ်းဆုပ်လို့ မရတော့ရင် နှစ်တွေကြာအောင် ခွဲခွာသွားခဲ့တဲ့ နင့်အတွက် ဒီမြို့က သိပ်စိမ်းနေတော့မယ်။
လမ်းတွေနဲ့ အိမ်တွေပေါ်မှာ ပြိုလဲကြနေတဲ့ တချိန်က ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းကြီးတွေ၊ ကျိုးပဲ့ပွင့်ထွက်နေတဲ့ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦကြီးတွေ၊ လမ်းပေါ်မှာ ကျီးလန့်စာစား ပြေးလွှားနေကြတဲ့လူတွေ၊ တချိန်က အမြဲတမ်း ဟန်နဲ့ပန်နဲ့ ရှိုးနဲ့ မိုးနဲ့ နေခဲ့ကြတဲ့ ရန်ကုန်မြို့သားတွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်က အကြောက်တရား၊ ဒေါသနဲ့ သောကတွေ …။
ရန်ကုန်ဟာ စစ်မျက်နှာပါ ဟေမန်၊ ရန်ကုန်ဟာ စစ်မျက်နှာပါ …။
ဒါပေမဲ့ ဒီစစ်ဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ လူသားတွေ အကြားက စစ်ပွဲပဲလို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီစစ်ပွဲဟာ ဆိုင်ကလုန်းဆိုး "နာဂစ်" နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အကြားက ပြသနာတခုဆိုတာထက် အဓိပ္ပါယ် အများကြီး ပိုပါတယ်။ ဒီစစ်ပွဲဟာ တာဝန်မဲ့မှုနဲ့ နာကျင်မှုအကြားက စစ်ပွဲ။ ဒီစစ်ပွဲဟာ ရက်စက်မှုနဲ့ အမှန်တရား အကြားက စစ်ပွဲ။ ဒီစစ်ပွဲဟာ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ မျှော်လင့်ချက် အကြားက စစ်ပွဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် …
ရန်ကုန်ဟာ စစ်မျက်နှာပဲ ဟေမန်။
One of signpost of University at the fence, Rangoon University, Kamayut, Rangoon
မေလ ၂ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်ဟာ အရင်အတိုင်းပဲ စည်စည်ကားကားရှိနေခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မြို့သားတွေလည်း ရုံးတက်၊ ဈေးဝယ်၊ လည်ပတ်နဲ့ ပုံမှန်နိစ္စဓူဝထဲမှာ လည်ပတ်နေတုန်းပဲ။ သမိုင်းတွင်မယ့် ခြောက်ခြားစရာ အပြောင်အလဲတခု လာနေပြီဆိုတာကို ဘယ်သူမှ သတိမထားမိကြဘူး။ သတိထားမိအောင်လည်း ဘယ်သူကမှ ဒီမြို့သားတွေကို ကြိုတင်အသိမပေးခဲ့ကြဘူး။
မေလ ၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ မိုးတွေ ရွာနေခဲ့တယ် ဟေမန်။ တကယ်တော့ မိုးရွာနေခဲ့တာ ရက်အနည်းငယ်တောင် ရှိသွားပြီ။ မိုးထဲမှာ ပျော်ပြီးသား ရန်ကုန်သားတွေအတွက် မေလရဲ့မိုးဟာ ပန်းနဲ့ပေါက်သလိုပါ။ တချို့က မုန်တိုင်းတခု လာနေပြီဆိုတာကို သိကြတယ်။ တချို့က မသိကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာတခုကတော့ သိသူရော မသိသူတွေပါ ဒီမုန်တိုင်းရဲ့ ပြင်းအားနဲ့ ဖျက်ဆီးအားကို မသိခဲ့ကြပါဘူး။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ရန်ကုန်မြို့ကို ဦးတည်လာနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိုးရိမ်မှု မလွန်ကဲပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အစိုးရရဲ့ တိုတိုတုတ်တုတ် ကြေညာချက်အောက်မှာ ဒီနေ့အိမ်ကို စောစောပြန်ဖို့နဲ့ တခါးလုံအောင်ပိတ်ပြီး အိပ်ယာထဲမှာ ကွေးဖို့လောက်ပဲ မြို့သားအများစုက ယူဆခဲ့ကြတယ်။
ရေကို ကြိုတင်စုဆောင်းထားဖို့၊ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြင်ဆင်ထားဖို့၊ အထပ်မြင့်မြင့်က လူတွေနဲ့ တောရွာကလူတွေ လုံခြုံတဲ့နေရာကို ကြိုတင်ရွေ့ပြောင်းထားကြဖို့ ပြည်သူတွေကို ဘယ်သူကမှ ကြိုတင် သတိမပေးကြဘူး။
တကယ်ကတော့ "နာဂစ်" လာနေပြီဆိုတာကို ရက်တွေနဲ့ ကြိုပြီး သိနေခဲ့ပြီးသား။ မိုးလေ၀သဂြိုလ်တုတွေနဲ့ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေက ခန့်မှန်းထားပြီးသား။ "နာဂစ်" ဟာ ကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့ ငလျင်တခုမဟုတ်ဘူး။ သူ့ခရီးစဉ်ကို ကြိုတင်အသိပေးပြီး ဟိန်းဟောက်ချီတက်လာတဲ့ မုန်တိုင်းတခု။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ပအဖျက်သမားတွေရဲ့ ကြိုးဆွဲရုပ်သေး အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာမှာကို မလိုလားသူတိုင်း - အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံမဲပေးကြ … ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံကိုပဲ ဖိအော်နေကြတဲ့ အစိုးရမီဒီယာတွေက "နာဂစ်" ကို နေရာမပေးခဲ့ကြဘူး။
ဒီလိုနဲ့ သနားစရာကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးဆီကို ကူရာ ကယ်ရာမဲ့စွာနဲ့ တလှမ်းချင်းတိုးဝင်သွားခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ သတ်ကွင်းထဲကို မတော်တဆရောက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတ်ကွင်းထဲကို အပို့ခံလိုက်ကြရတာပါ။
ည ၁၁ နာရီခွဲ လောက်ကတည်းက တဖြည်းဖြည်းမောင်းတင်လာတဲ့လေဟာ ညသန်းခေါင်ကျော်မှာ အရှိန်သိပ်ကောင်းနေပြီ။ မနက် ၃ နာရီလောက်မှာတော့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး မုန်တိုင်းတခုကို ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့အတူ (ဒီတကြိမ်လည်း) အစိုးရရဲ့ သစ္စာဖောက်မှုကို ခံရပြန်ပြီဆိုတဲ့အသိက ရန်ကုန်မြို့သားတွေဆီကို ၀င်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ မုန်တိုင်းဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်သတ္တ၀ါကြီးတကောင်လို အော်ဟစ်နေတယ်။ ကောင်းကင်မှာ သွပ်ပြားတွေ ၀ဲပျံနေတယ်။ သစ်ပင်တွေ တ၀ုန်းဝုန်းပြတ်ကျနေတယ်. နောက် တနေ့ နေ့လည်အထိ စက္ကန့်တိုင်းဟာ ကြောက်စရာ အတိပြီးခဲ့တယ်။
University Dhamma Hall seen after the fallen trees, Rangoon University, Kamayut, Rangoon
နောက်တနေ့ မုန်တိုင်းစဲလို့ လမ်းမပေါ်ကို ထွက်ကြည့်ကြတဲ့အခါ အပျက်အစီးပုံတွေကြားက စစ်မြေပြင်တခုကို ရန်ကုန်မြို့သားတွေ တွေ့ရှိလိုက်ကြတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ပြိုလဲနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေက ပိတ်ဆို့နေတယ်။ ကားတွေ ယာဉ်တွေ ပျက်စီးနေကြတယ်။ အဆောက်အဦတွေ ပြိုကျနေတယ်။ ဓာတ်တိုင်၊ ဖုန်းကြိုး၊ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ ရန်ကုန်ဟာ "နာဂစ်" ရဲ့ ဖ၀ါးအောက်မှာ ပြားပြားဝပ်သွားခဲ့ပြီ။
လူတွေဟာ ခြောက်ခြားစွာနဲ့ မြို့တော်ကြီးကို ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကြည့်နေကြတယ်။ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး မြင်ကွင်းတခုကတော့ ကောင်းကင်မှာ အုပ်လိုက် ပျံသန်းရင်း ထိတ်လန့်အော်ဟစ်နေကြတဲ့ ကျီးကန်းအုပ်ကြီးတွေပဲ။ သစ်ပင်တွေ ပြိုလဲကုန်ကြလို့ နားခိုစရာမရှိပဲ အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြတဲ့ ကျီးကန်းအုပ်တွေက ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကောင်းကင်မှာ နိမ့်နိမ့်လေးတွေ ပျံရင်း အော်ဟစ်နေကြပုံဟာ ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းလှတယ်။
ငါ့မိတ်ဆွေ ပန်းချီဆရာကြီးတဦးကတော့ မှတ်ချက်ချတယ်။ "ဗန်ဂိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မသေခင် ရေးသွားတဲ့ပန်းချီကားလိုပဲ၊ ငှက်မည်းကြီးတွေက ပျံလို့ …" တဲ့။
မုန်တိုင်းစဲသွားမှ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ မြို့တော်ကြီးကို ပွေ့ဖက်လိုက်ရတဲ့ မြို့သားတွေဟာ တစုံတရကို သတိထားမိသွားကြတယ်။ အဲဒါကတော့ စက်တင်ဘာပြီးကတည်းက လမ်းတွေပေါ်မှာ ဟန်ရေး တပြပြနဲ့ လက်နက်တွေ ဆွဲကိုင်ပြီး လူထုကို ခြိမ်းခြောက်နေခဲ့ကြတဲ့ စစ်တပ်၊ ရဲနဲ့ ကြံ့ဖွံ့တွေ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းပဲ ဟေမန်။ မုန်တိုင်းတိုက်မယ့် ၂ ရက်နေ့ ည ရ နာရီအထိ အလုံလမ်းတလျောက် မောင်းသွားတဲ့ လုံထိန်းကားတွေကို ငါတို့ တွေ့ခဲ့သေးတယ်။ အဓိကရုဏ်း နှိမ်နှင်းရေး ၀တ်စုံတွေ၊ သေနတ်တွေ၊ တုတ်တွေ၊ ဒိုင်းတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ်က ပြည်သူတွေကို စိမ်းစိမ်းကြီးတွေ ကြည့်လို့။ အခုတော့ သူတို့ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြပါပြီ။
ဆရာမြသန်းတင့်သာရှိရင် ရန်ကုန်မြို့ကို မီးလျှံထဲက ပြန်ထတဲ့ ဖီးနစ်ငှက်နဲ့ တင်စားလိမ့်မယ်။ တိုက်ပွဲ အမျိုးမျိုးကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့ ရန်ကုန်သားတွေဟာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး အပျက်အစီးပုံတွေကို မ တင် ရှင်းလင်းဖို့ အားထုတ်ကြတယ်။
၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ကို ပြည်သူတွေ ကိုယ့်ခြေ ကိုယ့်လက်နဲ့ ပြန်လည် ပြုစုကြရတော့တယ်။ အစိုးရဘက်ကတော့ ရေဒီယို၊ ရုပ်သံဝေးလို့ လော်စပီကာနဲ့တောင် လှည့်ပြီး အားပေးဂရုပြုမှု မရှိကြဘူး။ ဘာမှ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အပြင် မုန်တိုင်းတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတောင် ကြေညာမှု မရှိခဲ့ဘူး။
The historic ground of University Student Union building after the storm
တချိန်လုံး တိတ်နေခဲ့တဲ့ အစိုးရဟာ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး နောက်နေ့ ၃ ရက် ညနေ ၅ နာရီမှာ GSM တယ်လီဖုန်းတွေကို MPT (Myanmar Post & Telecomm) ဆိုတဲ့ မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလိပ်စာနဲ့ သတင်း မက်ဆေ့ခ်ျ ပေးပို့ခဲ့တယ်။ "မုန်တိုင်း ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ဝင်မယ်။ ပြင်းထန်မယ် …" တဲ့။
ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး တိုက်ခိုက်မှုကြီးကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ လူတွေဟာ ဒီသတင်းကို ကြားတော့ သွေးပျက်သွားကြတယ်။ အပျက်အစီးတွေကို ရှင်းလင်းဖို့လုပ်နေကြတဲ့၊ လူတွေကို ကယ်ဆယ်ဖို့ လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံး ခြေမကိုင်မိ၊ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်သွားကြတယ်။ သနားစရာကောင်းတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ကိုးကွယ်ရာမဲ့ ဖြစ်သွားကြတယ်။
တကယ်တော့ MPT ဆိုတဲ့ မြန်မာဆက်သွယ်ရေးက ပေးပို့တဲ့ ဒီသတင်းဟာ အမှားပါ။ ဒီ ယူဆချက်အမှားကို နေပြည်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကလည်း သံယောင်လိုက်ကြတယ်။ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီနဲ့ ၆ နာရီ အကြားမှာ "နာဂစ်" ထပ်လာမယ်တဲ့။ နာဂစ် ထပ်မလာခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှု အစွမ်းကုန်မဲ့နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအကြားမှာ သူတို့အပေါ် အထင်သေးမှုနဲ့ မုန်းတီးမှုဟာ အပြင်းထန်ဆုံး အဆင့်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့တော့တယ်။
ဘာမှ ကူညီ အားပေး ဆောင်ရွက်မှု မရှိတဲ့ အစိုးရဟာ GSM Message တခုပေးပို့ခြင်းနဲ့ လူထုကို သတင်းမှားပေးပြီး ခြောက်ခြားမှု ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ရေကျော်ထိပ်မှာ သစ်ပင်ပိနေတဲ့ ကားတစင်းရဲ့ ပိုင်ရှင် လူလတ်ပိုင်းတဦကတော့ အခုလို အော်ဟစ် ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်။ " လူတွေကို သတ်ဖို့ လမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ အကောင်တွေ၊ အခုကျတော့ တကောင် တမြီးမှ မတွေ့ရဘူး …" တဲ့။
ပျက်စီးနေတဲ့ အိမ်စုတ်ကလေးရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့ အသက် ၅၀ ကျော် အမျိုးသားတဦးကတော့ - " တာဝန်မဲ့တဲ့အကောင်တွေ၊ ဒီတခေါက်တော့ ထောက်ခံမဲ လာတောင်းရင်၊ x - ပဲ ရမယ် …" လို့ ရေရွတ်နေတယ်။
Rangoon University Main Entrance
ကယ်ဆယ်ရေး အစီအမံ မပြောနဲ့၊ ယူနီဖောင်းတောင် မမြင်ရတဲ့ ရန်ကုန်မှာ လူတွေနဲ့ မကြုံစဖူး အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ အဆိုးဝါးဆုံးကတော့ "ရေ" ပေါ့ ဟေမန်။ ရေသန့်ဗူးကြီး တဗူး ကျပ် ၁၀၀၀ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါတောင် ၀ယ်လို့ မရသေးဘူး။ တပေါက်ချင်း ကျနေတဲ့ ရေပိုက်ကို တန်းစီနေတဲ့ လူတွေဟာ မျက်စိတဆုးံပဲ။
လမ်းပေါ်မှာ လူတွေအားလုံးဟာ ရေပုံးအလွတ်လေးတွေကို ကိုင်ပြီး ရေရနိုင်မယ့် နေရာကို ရှာဖွေနေကြတယ်။ အစိုးရက လူထုကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ကျောခိုင်းလိုက်ချိန်မှာ ဒီတာဝန်ကို ကြားဝင်ထမ်းရွက်ပေးသူတွေကတော့ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေပဲ။ သူတို့မှာ လက်ကျန်ရှိတဲ့ ရေတွေကို ပြည်သူတွေကို ခွဲဝေပေးခဲ့ကြတယ်။ တချို့ဗလီတွေလည်း လူထုကို ရေ ထောက်ပံ့ကြတယ်။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာပြသနာကလည်း သိပ်ကြီးမားတယ်။ ဆိုက်ကားခက ဟိုနား ဒီနား ကျပ် ၁၀၀၀။ ဘဲဥတလုံး ၃၀၀။ မုန့်ဟင်းခါး တပွဲ ၅၀၀။ လက်လုပ်လက်စား ပြည်သူတွေဟာ တနေ့စာ စားဖို့တောင် မရှိကြတော့ဘူး။ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ထားရတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ရပ်ထားရတယ်။ တနေ့လုပ်မှ တနေ့စားရမယ့် လက်လုပ်လက်စား ပြည်သူတွေအတွက် ဒုက္ခဟာ အရမ်းကြီးမားသွားတော့တယ်။ ဈေးတွေမှာ ဈေးသည်တွေဟာလည်း ခြောက်ချားနေကြတယ်။ ၀င်ငွေလေးရဖို့ကို ကြိုးစားဖွင့်ကြပေမယ့် လူတဦးစ နှစ်ဦးစ ကတော့ ပိုက်ဆံမပေးပဲ ပစ္စည်းတွေကို ကောက်ယူသွားတဲ့အခါမှာ ဈေးသည်တွေ ဈေးပိတ်လိုက်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ ကန်စွန်းရွက် ၂ ပင်လောက် ပါတဲ့ အစည်းလေး တစည်းကို ကျပ် ၂၂၀ ပေးပြီး ၀ယ်ရတော့တယ်။
ငါမိတ်ဆွေ တယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကို ငါ နင့်ကို ပြောပြချင်သေးတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆိုင်ပေါ်မှာ သစ်ပင်ပိနေလို့ သူက ရှင်းလင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါ စည်ပင်သာယာက လာပြောတယ်။ ရှင်းချင်တိုင်း ရှင်းလို့ မရဘူးတဲ့။ ဒီအပင်ဟာ ပျဉ်းကတိုး ဖြစ်နေလို့ သစ်တောက ခွင့်ပြုချက်စာကျမှ ရှင်းပါတဲ့။ ဟေမန်ရေ … ရှိသမျှသစ်တောအားလုံးကို ပြောင်အောင် ခုတ်ယူသွားတဲ့ တေဇတယောက် ဒီစကားကြားရင် ဘာပြောမလဲ ငါသိချင်တယ်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ။ ရန်ကုန်ကို နင်မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူး။ သမိုင်းဝင် သစ်ပင်တွေ အားလုံးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး အမိုးတွေ အုတ်ကျွတ်တွေနဲ့ နံရံအချို့ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အတွင်းဝန်ရုံး (၀န်ကြီးများ ရုံး) ကို နင်မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စိမ်းမှိုင်းနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေ မရှိတော့လို့ ရုပ်ပျက်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းကို နင်မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူး။
အခုတော့ ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ကျီးကန်းတောင် နားစရာ 'ကိုင်း' မရှိပါဘူး ဟေမန် ရယ်။
ဒီဒုက္ခက ကြီးပေမယ့် ရန်ကုန်က လူတွေ သိကြပါတယ်။ ဘိုကလေး၊ ငပုတော၊ လပ္ပတ္တာ၊ ဖျာပုံ၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်းနေရာတွေဟာ ဒို့ထက် ပိုဆိုးတယ်လို့။ တကယ်တော့ အဲဒီနေရာတွေဟာ သင်းချိုင်းတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
မနက်ဖြန်ဆိုရင် ငါ့ဇနီးနဲ့ သားကလေးကို သယ်သွားမယ့် ဘတ်စကားလေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတနေရာက မြို့လေးတမြို့ကို သွားလိမ့်မယ်။ ငါကတော့ ရန်ကုန်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာတလုံးနဲ့ ကျန်ခဲ့ဦးမယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ယူမယ်။ ငါ သိသမျှ ကမ္ဘာကို ဖော်ထုတ်မယ်။ နင့်ကို ပုံမှန်စာရေးမယ်။ ဒီစစ်ပွဲကို ငါ သတင်း ပေးပို့မှ ဖြစ်မယ်။ ငါပြောခဲ့တယ် မဟုတ်လား။
ရန်ကုန်ဟာ စစ်မျက်နှာ …။ ။
Posted by Unknown | at 2:03 AM |0comments
The disaster of Burma's dictatorship